I-gReader iyanyamalala kwiVenkile yeGoogle Play: ungazikhuphelela njani oyena mfundi weRSS ubalaseleyo | I-Androidsis
UManuel Ramirez | | Ukusetyenziswa kwe-Android, Tutorials
gReader waba ngumfundi weRSS ngokugqwesa kwi-Android, kodwa kwiintsuku ezimbalwa (asazi ukuba zingaphi ngokuthe ngqo) inyamalale kwiVenkile yokuDlala kuGoogle. Oku kuthetha ukuba ukuba nangayiphi na indlela uyikhuphile kwaye ufuna ukuyifumana kwakhona, kuya kufuneka uyenzele imali.
Ngethamsanqa unayo apha kwi-Androidsis ukuya ikufundise indlela yokukhuphela i-Greader zombini kwinguqulelo yasimahla njengaleyo ihlawulweyo, usetyenziso oluthi, nangona lungakhange luhlaziywe kangangeminyaka emibini, luseyona ndawo iphambili xa umntu efuna ukulandela zonke iiwebhusayithi ezinomdla ezivela kwi-RSS feed mihla le.
1 gReader, umfundi omkhulu we-RSS oye wanyamalala
2 Uyikhuphela njani i-gReader kwi-Android yakho
gReader, umfundi omkhulu we-RSS oye wanyamalala
gReader ibonelela ngendawo yonke yeempawu ze Yenza ngokwezifiso amava ethu okufunda ukusuka kumanani amaninzi e-RSS. Ukusebenza kwayo ngokungafaniyo kunye noluhlu olubanzi lweenketho lwenze ukuba ibe ngowona mfundi ufundayo weRSS. Imisebenzi njengokukhangela iifolda zobhaliso, umxholo omnyama / okhanyayo, ukudityaniswa kweenkonzo ezahlukeneyo zokufunda okanye ukubanakho ukusebenzisa zombini iakhawunti kaGoogle kunye neFeedly (ungalibali i-Facebook), babe nakho ukuchaza usetyenziso olukhulu.
Ekuphela kwento yokuba iminyaka emibini, ngenxa yezizathu ezingaziwayo kuthi, umyili wayo uyekile ukuyihlaziya. Ngesi sizathu kuye kwafuneka sibuyele kwabanye abafundi be-RSS njengeLizwi elikhulu; esele senze uhlolo kuyo ukuze wazi ukuba igqityiwe kangakanani. Eyona nto ingumnqa kuyo yonke into kukuba kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo gReader wanyamalala kwiVenkile yeGoogle Play.
Asazi nesizathu sokuduka kwakhe. Ngokuqinisekileyo kufuneka yenza ngokungabikho kwenkxaso ngonjiniyela, abaninzi babalekela kwingxaki kunyaka ophelileyo ngokungabinakho ukusebenzisa iziqinisekiso zabo zikaGoogle ukungena. Nangona kunjalo, ukuba uya kwiFeedly kwaye uqhagamshele iakhawunti yakho neakhawunti yakho kaGoogle, uya kuba nakho ukungena kwi-gReader ngaphandle kwengxaki.
Uyikhuphela njani i-gReader kwi-Android yakho
Ngapha koko, uyikhuphile iiveki ezimbalwa ezidlulileyo, kulapho sibuyile sayokukhangela ufakelo, xa umyalezo wokuba awufumaneki uvela. Kungenxa yoko le nto sikhawulezisile ukufumana enye indlela ukuze ukhuphele gReader. Kwaye ikhuseleke kakhulu, kuba ivela kwindawo yokugcina izinto eGithub eyenziwe yi-Innoreader uqobo, igama elisetyenziselwa inkampani emva kophuhliso lwe-gReader.
Into yokuqala esiza kuyenza yintloko kule khonkco.
Apho uya kufumana Uluhlu olupheleleyo lwee-APK ukusuka gReader.
Lowo usithandayo ngowokugqibela, 420 kuzo zombini iinguqulelo zasimahla nezihlawulelweyo.
Intlawulo iya kuba yile linki: Khuphela i-APK ye-gReader Pro 420.
Ngoku kufuneka uyikhuphele apho ithi «Khuphela».
Uya kuba nayo kwimemori yangaphakathi yeselfowuni ukuqala ukufakwa kwayo. Kuphela Kuya kufuneka ungene ngeakhawunti yakho yeFeedly. Khumbula ukuba ukuba awunayo iakhawunti kaGoogle edityanisiweyo kwaye uzama ukungena, iphepha elinempazamo liya kuvela. Ukuyicombulula, kuya kufuneka ungene ngeakhawunti yakho yeFeedly kwaye uqhagamshele iakhawunti kaGoogle. Ubuyela kwi-gReader kwaye yonke into yenziwe.
Uhlelo lokusebenza oluqhubekayo iluncedo kakhulu kwimisebenzi ethileNangona ukuguda nokusebenza kungaphosi xa kulayishwa ikhonkco le-URL kwisicelo ngokwaso. Umsebenzi okhoyo kumfundi we-RSS okhankanywe apha ngasentla kwaye ubizwa ngokuba liLizwi. Ukuphumla, umfundi ogqibeleleyo we-RSS yemihla ngemihla kwaye sisamangalisiwe kukunyamalala kwayo kwiVenkile yeGoogle Play.
Ngokukodwa ngenxa yokuba isenamanqaku angama-4,4 kwi-app engakhange ihlaziywe iminyaka emibini kwaye isasetyenziswa ngabaninzi. Ukuba ungomnye wabo kwaye ufumanise xa uyikhupha ukuba awunandlela yakubuya kwiVenkile yeGoogle Play, uyakwazi ukukhuphela i-gReader enkosi kweli nqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Uyikhuphela njani i-gReader, enye yezona zifundo zibalaseleyo ze-RSS ethe yanyamalala kwiVenkile yeGoogle Play